Raw Sustanon 250 vovoka - Mpanao mpanamboatra & mpamatsy - trano
Ny Sustanon 250 dia iray amin'ireo steroids mora indrindra izay azonao ao amin'ny UG labs. Na izany aza, dia toy izany koa ny iray amin'ireo lafo indrindra. Ny vovo-dronono Sustanon 250 no endrika malaza indrindra amin'ny testosterones exogenous. Ny fampiasana fitsaboana testosterone dia ampiasaina indrindra mba hampitomboana ny testosteronan'ny olona ho amin'ny ambaratonga salama. Amin'ny fanamafisana ny fatran'ny testosterone dia afaka mahatsapa ho ara-dalàna sy salama indray ireo lehilahy.
Ny horonan-tsary fanondrahana Sustanon 250
Rano Sustanon 250 vovoka Description
Ny Sustanon dia marika ho an'ny solika mifototra amin'ny solika mifototra amin'ny testosterone voaporofo.
Ny Rohan Sustanon 250 roapolo dia singa misy fitiliana testosteron efatra efa voaporofo:
60 levitra testosterone isocaproate
Ny tarehimarika ao amin'ny anarana dia milaza fa ny votoatin'ny testosteron ao anaty singa tsirairay dia 250 sy 100 mg / ml, mifanaraka amin'izany.
Ny karazana testosterone isan-karazany dia manome ny antsasaky ny fiainana. Ny fanesorana ny molekiolan'ny testosterone dia manome fivoahana (fa tsy linear) ny hormone testosterone avy amin'ny tahirin-tsakafo ao amin'ny plasma blood.
Raha ny tanjon'ireo esoeso testosterone mifangaro ao Sustanon dia ny hanomezany testosterone bebe kokoa, ny testosterone iray lava-be, toy ny testosterone cypionate na testosterone enanthate, dia mety hanome azy bebe kokoa ny testosteron serum.
Ny Sustanon no fomba fitsaboana testosterone indrindra any Angletera.
Ity endrika testosterone ity dia safidy malaza amin'ny steroid anabolic eo amin'ny bodybuilders sy ny atleta.
Rano Sustanon 250 vovoka Specifications
Product Name Rano Sustanon 250 vovoka
Anarana simika Sustanon 250 vovoka
Brand Name Sustanon / Sustanon 250 vovoka
molekiolan'ny Formula /
molekiolan'ny Wvalo /
mitsonika Point 33-40 ℃
Ny antsasaky ny biolojia 7-9 andro
Color Fotsy kristaly fotsy
Application Ny Sustanon dia ampiasaina mba hahitana ny tsy fahampian'ny testosterone voamarina amin'ny lehilahy.
Inona ny Rohda Sustanon 250 vovoka?
Ny Sustanon 250 dia iray amin'ireo steroids izay malaza be sy ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny fitsaboana ary koa amin'ny fambolena. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia ampiasaina ny fitsaboana ny olona manana testosterone ambany kokoa mba hanatsarana ny fahasalaman'ny lehilahy. Ny fitomboan'ny testosterone dia mamerina ny mahazatra sy ny fahasalaman'ireo lehilahy. Ny vokatra dia ampiasaina be koa ao amin'ny vondrom-bahoakam-borona. Malaza amin'ny vokatra tsara amin'ny fanampiana ireo bakteria manana haingo haingana sy be dia be.
Ahoana ny Rohan Sustanon 250 vovoka asa
Ny fitsaboana Sustanon dia ahitana testosterone esters (propionate testosteron, phenylpropionate, isocaproate et decanoate). Ireo dia avy amin'ny vokatra avy amin'ny testosteron lahy hormone eo amin'ny lahy sy ny vavy, izay novolavolain'ny testicles. Testosterone no hormone tena ilaina amin'ny fivoarana ara-dalàna, ny fampandrosoana ary ny asan'ny taovan'olombelona lahy sy lahy ary ny lahy.
Ny testosterone dia tena ilaina amin'ny famokarana siramamy, ny firaisana ara-nofo, ny fananganana fananganana, ary ny fiasan'ny prostaty ary ny firafitry ny fananahana hafa. Izy io koa dia manana andraikitra amin'ny hoditra, hozatra, skeleta, voa, aty, tsoka, ary rafi-pitabatabana.
Ny tahan'ny testosteronin'ny natiora dia mihena tsikelikely amin'ny taonany ary latsaka haingana rehefa manala ny fitsaboana (ohatra amin'ny fitsaboana ny homamiadan'ny valan'aretina). Mety hianjera koa noho ny aretina testicule (hypogonadism na eunuchoidism), na aretin'ny fihanaky ny gripa (trondro iray ao amin'ny atidoha izay mifehy ny famokarana hormonina).
Ny testosterone ambany dia mety miteraka soritr'aretina toy ny fihenan'ny firaisana ara-nofo, ny erectile dysfunction (impotence), ny tsy fahampian-tsakafo, ny herim-po, ny fahaketrahana ary ny fihenan'ny taolana (osteoporose).
Ny fametrahana testosteron dia ahafahan'ny testosterone voajanahary hiverenana amin'ny ara-dalàna ary hanamaivana ny soritr'aretina.
Rano Sustanon 250 vovoka Dosage
Raha toa ka ampiasainao voalohany ny Sustanon 250 ianao, dia tokony hampiasaina mihoatra noho ny ampy ny fampidirana iray indroa isan-kerinandro. Ny 500mg / herinandro dia dose tsara tsara ho an'ny Testosterone ary iray azo atoana soa aman-tsara.
Ny herinandro mahazatra dia maharitra herinandro 8-12 miankina amin'ny tanjon'ny olona.
Na izany aza, mety hampiasa hatramin'ny 1000 mg / herinandro na mihoatra ny mpampiasa efa za-draharaha. Ao amin'ny doses avo, ny loza ateraky ny voka-dratsin'ny aretina dia tena lehibe.
Ny Sustanon 250 dia azo ampiasaina amin'ny steroid hafa.
Rano Sustanon 250 vovoka fampiasana
Ny Sustanon 250 dia ampiasaina amin'ny olon-dehibe ho an'ny solontenan'ny testosterone mba hiatrehana ireo olana ara-pahasalamana isan-karazany vokatry ny tsy fisian'ny testosteron (lahy hypogonadism). Izany dia tokony hohamarinina amin'ny isam-pitsaboana roa samihafa momba ny fitsaboana ary mampiditra soritr'aretina toy ny tsy fahampian-tsakafo, ny tsy fahampian-tsakafo, ny tsy fahampian'ny firaisana ara-nofo, ny reradreraka, ny toe-piainana mampihetsi-po ary ny fahaverezan'ny taolana vokatry ny hormone ambany.
Ny Sustanon 250 dia azo ampiasaina koa ho fitsaboana fanohanana ho an'ny transsexuals amin'ny lahy.
Buy Sustanon powder 250 avy amin'ny Buyaas.com
Sustanon 250 Mampiasa, Cycle, Dosage, Benefits, Reviews
Harris Ron; Real Bodybuilding: Fahamarinana avy amin'ny 25 Taona ao amin'ny tranokely (2008) p.50
Nam Paul; Bodybuilding sy Steroids: Ny Tantarako Manokana (2017)
Spellwin Geaorge; Testosterone Steroid Cycles: anisan'izany ny Ultimate Sustanon 250 Cycle (2015)
Tilin Andrew; Ny Doper manaraka Door: Ny taona mahagaga sy mahatsiravina momba ny fampivoarana ny fampandrosoana ... (2011) p 38,
Collins Rick; Toe-tsaina ara-dalàna: Anabolika any Amerika (2002) p172, 173,427